Tibbana kana artistoonni Oromoo PP akka deeggaran qondaaltoota ODPtin gaafatamaa jiru!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTibbana kana artistoonni Oromoo PP akka deeggaran qondaaltoota ODPtin gaafatamaa jiru!!
Tibbana kana artistoonni Oromoo PP akka deeggaran qondaaltoota ODPtin gaafatamaa jiru.
Kun waan tokko na yaadachiise. MM Abiyyi akkuma aangoo qabateen artiistoota Oromoo waliin marii tokkoo geggeessee ture. <<Boo’icha keessaa bahaati afaan oromoof afaan amaaraa mix godhaa sirbaa. Waan isin kana hin gooneef uummatni biroon shakkiin isin ilaalu>> jedhe. Yaada dadhabaa fi dogoogoraa akkasi dhagahee hin beeku.
Rakkinni yaada kanaa inni jalqabaa “Itoophiyummaan” afaan amaaraa of keessaa hin qabaanne Itiyoophumaa guutu miti waan jedhu qabaachuu isaati. Ani akka dhunfaatti artistoonni Oromoo yeroo barbaadan afaan amaaraa makanii sirbuun isaani badaadha jedhee hin yaadu. Waan fedhan gochuuf mirga qabu. Garuu magaalaa keessatti institutional discrimination artistoonni Oromoo isaan muudhatu mo’uu yoo barbaadan afaan amaaraa makanii sirbuu qabu jedhee hogganaan Oromoo tokko gorsa akkasi akka furmaataati kennu walaalaadha. Aartiin Oromoo maalaqqaan deeggaramee ol guddatu malee, amma feedhe afaan amaaraan makamee dhiyaatu saba kaaniin fudhatama hin argatu. Abiyyi siyaasattiis akkasitti hubata. Oromoon uummataa biroon kan jaallatamuu danda’u wal gahii paartii irratti afaan ofii dhiisee afaan biraan yoo taa’ee itti fakkaata.
Rakkinni yaada kanaa inni lamataa, dhugaa lafa jirurraa faallaa ta’uu isaatti. Aartii fi sirba saba amaaraa kan dagaagsan keessa irra caalaan Oromtoota. Sirbaan Xilaahuun Gassassa caala afaan amaaraan sirbe eenyu? Alii biraannis Mohaamud Ahmed waliin sirbeera. Walaloo sirbaa yoo jedhame Saahilee Dagaagoo kaasuu ni dandeenya. Qindeessuudhaan yoo jedhame Mulugeetaa Abaate fi Eliyaas Malkaa waamu dandeenya. Dargagoota keessaas aartii Amaaraaf kan gumaachan baayyeetu jira. Tarii MM Abiyyi sirba hin dhageefatu ta’a. Ji’a lamaan dura Sheger FM irrati Ma’aazaan sirbitoota kam faa jaalatta isaan jennaan, “lakki ani sirba hin dhaggeefadhu” jedhe. Sirbi Oromoo boo’icha qofa akka ta’ee eessaa akka dhagahee hin beeku. Maddaalli kamiinuu Oromoon aartii saba kaabaaf amma gumaache, sabni kaabaa aartii Oromoof hingumaachine. Abiyyi artistoota kaabaa masaraa mootummaa keessati waliin bashannanu saniin mee Afaan Oromoon waa hojjedhaa hin jedhuun. Maaliif? Isaaf Itoophiyumaan dhugaa kan ibsamu afaan amaaratiin waan ta’ef.
Amma filannoon itti qaqabnaan artistoota Oromoo <<boo’icha keessa bahaa afaan birootin sirbaa>> jettaniin san deebitanii nu deeggaraa jechuun hin taatu. Kan isin dhagahaan natti hin fakkaatu. PPn Oromiyaa keessa abdii wayiitu hin qabdu. Sirba PP leeliisu yoo barbaaddan Samaahanyi balaw gaafadhaa.
Filannoo dhufu kanarratti uummatni Oromoo sagalee tokkollee paartii PP jedhamu kanaaf kennuu hin qabu. “Waggaa digdami torbaaf TPLFif ergamaa jiraanne malee dantaa ummata Oromoof dhaabannee hin beeknu” jedhanii ummatatti himanii turan. Qeerroof qarreen dhiiga isaanitin cunqursaa TPLF jalaa isaan baasanii, kunoo amma bilisa baatanirtu gaaffillee Oromoof deebii nuu keennaa jedhanii imaanaa itti keennan. Isaan garuu gaaffiin uummatoota Itoophiyaa hundi tokko waan ta’eef akka sabaatti waan qabsoofnuf hin qabnu jedhanii sirna durii leellisuutti ka’aan. PP dhiisaati ODPn akka sabaatti gurmoofte gaaffiilee Oromoo gurguddoo deebisuu hindandeenye. Bara darbe waadaa gurguddaa erga seenan booda waggaa tokko keessatti of dhabamsiisan. Dhuguma PPn gaaffilee ijoo ta’aaniif deebii nuuf keenna jettanii yaaddu? Wannuma hin fakkaanne. Jawaariif Lammaan paartii keessan dafaa nu beeksisaa
የብልፅግና መሪ ቃል (ሞቶ) “አንድ አማራ ለሁሉም አማራ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ” ከሚለው የአብን መሪ ቃል የተቀዳ ነው።